Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Ndị IATA họpụtara onyeisi Economist ọhụrụ
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị IATA họpụtara onyeisi Economist ọhụrụ.
Marie Owens Thomsen ga-esonyere IATA dị ka Onye isi Economist ya dị irè na 4 Jenụwarị 2022.
Owens Thomsen ga-esi na Banque Lombard Odier, ebe ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi nke Global Trends na Sustainability.
Owens Thomsen nwere PhD na International Economics site na Ụlọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ na Geneva na MBA kwekọrọ na Mahadum Gothenburg na Economics International na Business.
N'ijide mba US, UK na Switzerland, ọ rụrụ ọrụ na UK, France na Switzerland ma na-asụ asụsụ Swedish, Bekee na French nke ọma.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA)) kwuputara na Marie Owens Thomsen ga-esonye na Association dị ka Onye isi Economist ya dị irè 4 Jenụwarị 2022.
Owens Thomsen ga-abịa site na Banque Lombard Odier, ebe ọ na-eje ozi dị ka isi nke Global Trends na Sustainability kemgbe 2020. Tupu mgbe ahụ ọ bụ ogologo oge Global Head of Investment Intelligence (2011-2020) na Indosuez Wealth Management. Na mgbakwunye, ọ jerela ozi na Chief Economist yana ọrụ ndị metụtara Merrill Lynch, Dresdner Kleinwort Benson na HSBC. Ọrụ ya dị iche iche gụnyekwara azụmaahịa na mmemme mmepe ahịa.
“Ọrụ Marie n'ihe gbasara nnukwu akụ na ụba na ilekwasị anya na nkwado ga-akwado ya iji dozie isi okwu nke ụgbọ elu — ya bụ mgbake na COVID-19 na nkwado. Na-esite na mpụga ngalaba ụgbọ elu, ọ ga-eweta nghọta na echiche ọhụrụ bara uru. Enwere m obi ike na ọ ga-aga n'ihu na aha IATA maka ịkọ akụkọ na nyocha nke dị mkpa maka ịkọwa ntinye nke ụgbọ elu na akụnụba ụwa na ịkwado maka ụgbọ elu ndị uwe ojii kwesịrị inwe ihe ịga nke ọma," kwuru. Willie Walsh, Onye isi Director IATA.
"Ana m abanye obodo ntà inye aka na ngalaba ụgbọ elu nke bụbu nnukwu ihe na-ebute uto akụ na ụba ogologo oge. Aga m eme nke a site na usoro nyocha nke na-achọpụta ihe na-akpata nsogbu dị oke egwu yana ngwọta ha kacha mkpa. Nke a dị mkpa ka ụgbọ elu na-amalite mgbake site na COVID-19 wee gaa n'ihu na njem na ikuku efu. Ana m atụ anya ọdịnihu ebe ụgbọ elu ga-eme nke ọma n'ime akụ na ụba ụwa na-adigide," Owens Thomsen kwuru.
Owens Thomsen nwere PhD na International Economics site na Ụlọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ na Geneva na MBA kwekọrọ na Mahadum Gothenburg na Economics International na Business. N'ijide mba US, UK na Switzerland, ọ rụrụ ọrụ na UK, France na Switzerland ma na-asụ asụsụ Swedish, Bekee na French nke ọma.
Owens Thomsen nọchiri Brian Pearce onye lara ezumike nka na IATA na mbido afọ a ka ọ rụchara ọrụ dị ka Chief Economist kemgbe 2004.